First ...715 16 17 18 19 27 67 ... Last
07-23-2012 02:12 AM #161
koluchaw ဆွေးနွေးဖူးတဲ့ မြေရှားဓာတ်ဆိုတာမျိုးလား မသိ၊ ဂျပန်မှာ အကြီးအကျယ်တွေ့ရပြီတဲ့။ ၂၂၇ နှစ် ထုတ်သုံးလို့ရသတဲ့။ MRTV4
Alley Cats, chitpa, fergusan, Grace, Hollinaz, honelay86, khit, ko too, kokoko123, kokoye, koluchaw, ktg, little caesar, mahawgani, MNO.BN, skyer, staraye, Thant Sin Htet, THIHA, yankanar, zepeian, zero6
07-23-2012 02:37 AM #162
Originally Posted by aungzaya
koluchaw aqG;aEG;zl;wJh ajr&Sm;"mwfqdkwmrsdK;vm; rod? *syefrSm tMuD;tus,fawGU&jyDwJh/ 227 ESpf xkwfokH;vdkU&owJh/ MRTV4
[kwfw,f udkatmifaZ,s ... *syefuRef;pk ta&SUzufrSm awGUaMumif; facebook rSm zwfvdkuf&w,f
Alley Cats, barronbala, chitpa, fergusan, Grace, GuruAM, Hollinaz, honelay86, jokershan, khit, ko too, kokoye, little caesar, mahawgani, mgmgthan, MNO.BN, painpainlay, skyer, staraye, Thant Sin Htet, THIHA, tiptop, yankanar, yokesoe, zepeian, zero6
07-23-2012 05:24 AM #163
၃ ရွက်ပါ..အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ရဲ. ..နောက်ကျော ဖက်က စာသားတချို.ပါ.
(ဧည်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူသည် ..အမှန်စင်စစ် ..ထိုနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း ..သက်သေခံ ..အလျှင်းမဖြစ်စေရ ..)
pmom; wcsdKUusefcJhr,f xifw,f/ 'Dvdk r[kwfbl;vm; .. udkololatmif .....
rSwfcsuf/ / rnfonfhEdkifiHom; azmfjyjcif;jzifh þvufrSwfudkifaqmifolonf tu,fpifppf xdkEdkifiHom; jzpfaMumif; oufaocH tvsOf; rjzpfap&/
rnfonfhEdkifiHom; qdkwJhae&mrSm tJ'DtcsdefawGwkef;u jrefrmEdkifiHom; cH,lMuwJh EdkifiHjcm;om;awG &Sdw,f/ w½kwf? tdE´d,? b*FgvD? *syef (ppfusef *syefwcsdKU &SdMuw,f) .. wjcm;EdkifiHjcm;om; vlenf;pkawGvnf; &SdMuw,f/ vlrsdK;vdkY azmfjywJh ae&mrSm EdkifiHemrnfudk wyfNyD; a&;Muw,f/ taMumif;wpkHwckaMumifh (Oyrm ... w½kwf-Arm t"du½kPf; jzpfMuawmh w½kwfawG w½kwfjynf jyefajy;Muw,f/) udk,frl&if; om;csif;rsm;&Sd&m EdkifiHudk jyefMuwJhtcg tJ'DEdkifiHom; jyefvkyfzdkY twGuf 'Du rSwfykHwifxJrSm ygwJh vlrsdK;emrnfu EdkifiHudk axmufjyNyD; EdkifiHom; jyefavQmufMuw,f/ jrefrmEdkifiHom; cH,lxm;NyD;olawGudk wcsdKUuvnf; w½kwfEdkifiHom; jyef&oGm;Muw,f/ (jrefrmEdkifiHvdkaygh ... udk,fhvlcHuvnf; aumif;? ydkufqHay;vnf; ay;Edkifqdkawmh &wmaygh)wcsdKUuvnf; tzrf;cH&NyD; jrefrmjynf jyefydkYwm cH&w,f/ jrefrma&mufawmhvnf; v0u Oya'eJY axmifESpfESpf cscH&jyefa&m/ aemufausmrSm nTefMum;csufrsm;qdkwm a&;xm;wm &Sdw,f/ nTefMum;csuftrSwf (13) rSm a&;xm;wm &Sdw,f/ wcsdKUuvnf; tzrf;cH&wm owif;Mum;awmh jyefcdk;0ifvmMuwmvnf; &Sdw,f/
aemufydkif; okH;acgufcsdK;awGrSm tJ'Dpmom;awG xnfhvmMuwm awGY&ygw,f/
akm, AungDin, AungNN, badinf, barronbala, batoe, fergusan, Hollinaz, honelay86, hsumyatmoe, jokershan, khit, ko too, koshwemung, ktg, mahawgani, MNO.BN, Ravan, staraye, THIHA, thuthuaung, tiptop, yankanar, yokesoe, zepeian, zero6
07-23-2012 06:22 AM #164
ajymif;zl;MuD;udkifjyD;rJqG,faom ... [l; ...*kPfxl;awGrsm;vdkufwm ..
ighpum;EGm;&? EGm;yvmwmausG;ovdkjzpfaomOmPfMuD;&Sif..acgif;xJrSm csD;
eJ htifwmAsK;wmawGudk Eleven Journal uw&m;0ifazmfjyvdkufygjyD/
bmawGjzpfrvJqdkawmaiGa&mifydwfum;ay: rSmquf&SKhpm;Mupdk h/
akm, Andrei07, apphyo, AungDin, AungNN, badinf, botherband, fergusan, HlaingKaLayThin, Hollinaz, honelay86, hsumyatmoe, Incubuz, JJerry, k-pooh, khit, ko too, ktg, linesone, mahawgani, mgmgthan, MNO.BN, myawlwint, palartoo, Peacock D. NgaPyae, Ravan, skyer, theinhtike84, THIHA, thuthuaung, unicorn7, Xabia, Xeno, yankanar, yelynn80, yokesoe, zepeian, zero6, zzz
07-23-2012 06:30 AM #165
Originally Posted by Peacock D. NgaPyae
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ စဖြစ်တုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ အခြားပြည်နယ်တွေလို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း မရှိလို့ ဒီပြဿနာဖြစ်ရတာပါ ဆိုပြီးဖတ်လိုက်ရတယ်။
အခု ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ဆိုတော့ မျက်စိလည်သွားတယ်ဗျ။
Source : Arakan Liberation Party
ကျတော်သိသလောက် ပြောရရင် အဲသည် အဖွဲ့က အင်အား ၁၀၀ တောင် မပြည့်တဲ့ အဖွဲ့ပါ။ အင်အားအရ၊ လှုပ်ရှားမှုအရ၊ ဒေသတွင်း ထောက်ခံမှုအရ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ လက်နက် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မခံရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အဖွဲ့ပါ။ အခု ဦးအောင်မင်းက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်တော့မှာ ပြန်ပေါ်လာပြီ သူတို့လည်း ဆွေးနွေးခြင်တယ် ဆိုလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရဖက်က အလေးထား တုံပြန်မှု မရခဲ့ဘူး။ အခု ဘင်ဂါလီ အာဏာရရေး ကြိုးပမ်းချိန်မှာ တစ်ချိုက ရခိုင် နယ်ခြားစောင့်တပ် ရှိဖို့ တောင်းဆိုလာခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ အချိန်ကိုက်ပြီး ငါ့တို့ရှိတယ်။ နင်တို့အတွက် ငါတို့ တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းတာလား၊ ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးနင်းခိုက်လုပ်တာလား တစ်ခုခုပါ။
ဒေသခံတွေရဲ့ လိုလားထောက်ခံမှုကို ဟုတ်ဟုတ်ငြားငြား မရဘဲ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်နဲ့ အသက်ဆက်နေတဲ့ အဖွဲ့လို ထင်ပါတယ်။ ပြန် အသက်သွင်းလို ကောင်းမယ် မထင်ပါ။
AungNN, aungzaya, badinf, barronbala, batoe, botherband, fergusan, hellocatcat, Hollinaz, honelay86, hsumyatmoe, khit, ko too, ktg, mahawgani, mgchaint, mgmgthan, MNO.BN, Peacock D. NgaPyae, Ravan, robin76, stroms, theinhtike84, THIHA, yankanar, yokesoe, zepeian, zero6, zzz
07-23-2012 08:12 AM #166
ဒီတပါတ် The Voice မှာ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတွေက ထိုင်းနိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝင်ပေါက်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Business Centre အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်း ဗြိတိန်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ကပြောကြားကြောင်း ပါလာပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. မြန်မာနိုင်ငံမှာက နိုင်ငံတကာအဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဖို့ အခြေခံအဆောက်အဦး ဘာမှမရှိတာ။ အင်တာနက်၊ဖုန်း၊ဘဏ်စနစ်၊လမ်းပန်း၊လေကြောင်း၊လျှပ်စစ် မီး ဘာဆိုဘာမှမကောင်းတာကိုး။
ဒီလိုသာသွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လယ်တောထဲက ဂိုထောင်၊စက်ရုံဘဝဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း အခြေခံကာယအလုပ်သမား ဘဝတွေပဲ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် အခြေခံအဆောက်အဦးတွေ အမြန်ဆုံးဖြည့်တင်းပေးသင့်ပါပြီ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလိုကဏ္ဍက ချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်သေးရင်တောင် ချက်ချင်းလုပ်ကိုင်လို့ရတဲ့ အင်တာနက်၊ဖုန်း၊ ဘဏ်စနစ်တွေကို အမြန်ဆုံးကောင်းအောင် ဖွင့်ပေးသင့်ပြီ။ လေကြောင်းမှာလည်း ပြည်တွင်းလေကြောင်းကဏ္ဍ ကိုအမြန်ဆုံးတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပြီ။ ခုတော့ ပြည်သူအများစုက ကားကိုပဲ အားကိုးနေကြရတာ။ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ လေကြောင်းဘက်မှာ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အနေအထား နည်းတော့ အစိုးရကနေ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ပြီး ထောက်ကန်ပေးသင့်ပါတယ်။
ပြည်သူလူထုနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်း လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ရာမှာ အရည်အသွေးကောင်းတာကို ဦးစားပေးသင့်ပါပြီ။ ဈေးနှုန်းအဓိက မဖြစ်သင့်တော့ဘူး။ တရုတ်ရဲ့ဈေးကွက်ကိုလည်း ကိုယ်မလုနိုင်မဲ့အတူတူ အရေအတွက်ထက် အရည်အသွေးကို ဦးစားပေးရပါမယ်။ ဒါမှရေရှည်အတွက်လည်းကောင်းသလို နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရမှာလည်း ရုပ်ပြကောင်းမှာပါ။ ခုတော့ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ပေါချောင်မကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖြစ်နေပြီး ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်လိုအပ်ချက်တွေချည်းပဲ။ လတ်တလောအကုန်အကျသက်သာပေမဲ့ နောင်ကျပိုမိုကုန်ကျသလို ဒီအတွက်ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန်၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေက မတန်တဆဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အစိုးရကလည်း စီမံကိန်းချပြီး ဘယ်နှစ်မှာ ဘယ်အပိုင်းကိုခုလက်ရှိထက် ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်မယ်။ ဒီအတွက် ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေချထားတယ် ဆိုတာမျိုး ထုတ်ပြန်ပေးသင့်တယ်။ ဒါမှပြည်သူလူထုကော နိုင်ငံတကာကပါ ချိန်ဆတွက်ချက်နိုင်မှာပါ။ ခုတော့ ဘာမှတိတိကျကျထုတ်ပြန်တာမျိုးမတွေ့ရဘူး။ Time Frame ချတာဘယ်နေရာမှ မတွေ့ရဘူး။ လက်လွတ်စပယ် ၄ လအတွင်းအပြီးဆောက်မယ် ဆိုတာမျိုးတွေပဲ ပြောနေတယ်။ ဟိုတခေါက် ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက ပြန်လည်တင်ပြဖို့ဝန်ကြီးတွေကိုမှာထားတာ ဒီလ ၃၁ နောက်ဆုံးထင်တာပဲ။ ခုထိတော့ ဘာမှမကြားသေးဘူး။
AHHA, AungDin, aungzaya, badinf, barronbala, botherband, happyvalley, hellocatcat, Hollinaz, honelay86, hsumyatmoe, Incubuz, k-pooh, khit, ko too, koshwemung, ktg, mahawgani, mgmgthan, MNO.BN, nnnaing, staraye, THIHA, tiptop, unicorn7, yankanar, yokesoe, zepeian, zero6
07-23-2012 08:48 AM #167
Originally Posted by iceforge22
ကျွန်တော်နားလည်သလောက်တော့ ဦးမြင့်တို့ အဖွဲ့ ကလည်းရှိသေးတယ်၊ အခုဟာက ကော်မတီ
ဆိုပြီး ထပ်ဖွဲ့ လိုက်တာထင်တယ်၊ ပိုသိတဲ့ လူတွေနည်းနည်းရှင်းပြပါလား
အခုအသစ်ဖွဲ့ လိုက်တာ.... အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအကြံပေးကောင်စီ..ဖြ စ်ပါတယ်။
အဓိကတာဝန်ကတော့ နိုင်ငံခြားအကူအညီအထောက်အပံ့၊ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီး မြှတ်နှံမှု၊
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမဟာဗျူဟာရေးဆွဲ ဘို့ လေ့လာသုံးသပ် ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သမတ အကြံပေး အဖွဲ့ များကလဲ အရင်အတိုင်းရှိပါတယ်။
နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊ဥပဒေ အကြံပေး အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ လုံးဟာလဲ ၁ခုမှ ဖျက်သိမ်းချင်းမရှိပါ ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျား...
aprilboy, AungDin, aungzaya, badinf, barronbala, batoe, botherband, Ceiko, Chit.tat.lun.tu, falcon11, hellocatcat, Hollinaz, honelay86, hsumyatmoe, Incubuz, Jim, jokershan, k-pooh, khit, ko too, ktg, little caesar, mahawgani, mgchaint, mgmgthan, MNO.BN, myawlwint, NyoMar, painpainlay, Ravan, robin76, sixlone, staraye, theinhtike84, THIHA, thuthuaung, yankanar, yokesoe, zelpha, zepeian, zero6, zzz
07-23-2012 01:12 PM #168
vGefcJYwJY ESpf 50 cefYuwJY tJ'Dtcsdef xdkif;0efBuD;csKyfNzpfwJY AdkvfcsKyfBuD; zDabmqGefu&efu NrefrmYtdrfapmifYtpdk;& tzGJY0ifwpfOD;NzpfwJY AdkvfrSL;csKyfatmifBuD;udk usaemfwdkYxdkif;edKifiH[m vuf&SdNrefrmedKifiH&JY wdk;wufaewJY taNcaersKd;a&mufzdkY qdk&if q,fESpfavmuf tNyif;txefvdkufrS a&mufedKifr,fvdkY aNymcJYzl;w,fvdkY uG,fvGefoGm;NyDNzpfwJY wcsdefu emrnfausmf edKifiHa&;orm;BuD; 0d"l&ocifcspfarmif&JY xdkif;edKifiHtaBumif; a&;xm;wJY pmtkyfwpftkyfrSm a&;cJYzl;ygw,f/
wavmu tm&SzGHYNzdK;a&;bPf&JY oHk;oyfcsufwpfckrSm Nrefrm[m wpfESpfudk *sD'DyD 6% eJYtxuf wdk;wufaeatmifvkyfygrS aemiftESpf 30 avmuftBumrSm vuf&Sdxdkif;edKifiH&JY taNcaersKd;udk a&mufr,fvdkY xkwfNyefoGm;wm Bum;vdkuf&ygw,f/ &mpk0ufrSm a&TrSefuif; xif;NzpfoGm;&yHku tHYBovdkYyifukefedKifbG,f/
'geJY ywfowfNyD; NyJaeatmifvkyfygrS wefumusr,fqdkwJY AdkvfcsKyf&JY rdefYcGef;udk oGm;owd&w,f? tJ'DrdefYcGef;xJrSm AdkvfcsKyfu olrsm;aNcwpfvSrf;vSrf;&if usKyfwdkYu q,fvSrf; tvSrf; 30 vSrf;rS wefumusr,fvdkY aNymcJYwm[m BudKwifedrdwfrsm;vm;vdkYawmif awG;rdwJYtxdyJ/
vuf&SdtaNcaerSm Nrefrm[m pD;yGm;a&; ynma&; usr®ma&; vlrSKa&; cRwfNcHKusaewJYtNyif edKifiHwumrsufESmpmrSmvnf; atmufusaemufuseJY aemufqHk; oHcif;wrefcif;rSmawmif udk,faNymorQ bmrSt&mr0ifwJY taexm;rsKd;/
wcsdefu Bum;aeedKifiHrsm;tzGJYudk pwifzGJYpnf;cJYedKifiHawGxJ xdyfwef;uwpfedKifiH? emrnfausmf Nidrf;csrf;pGm twl,SOfwGJaexdkifa&; befa'gif;rludk csrSwfcJYwJY OD;aqmifedKifiHxJu wpfedKifiH? ukvor*¾twGif;a&;rSL;csKyf &mxl;rSm tm&Som;wpfa,muftaeeJY yxrqHk; wm0ef,ledKifcJYwJYedKifiH? bufrvdkufvSKyf&Sm;rSKBuD;rSm &J&Jawmuf aNymedKifqdkedKifcJYwJYedKifiH? tJ'gawGtm;vHk; tckawmY yHkNyifNzpfcJY&NyD/
'Dvdktaexm;rsKd;rSm usaemfwdkY[m AdkvfcsKyfaNymcJYovdk NyJatmifvkyfrS wefumusrJY taNcae/ 'gayrJY usaemfwdkYu tcktcsdeftxd &efNzpfvdkYaumif;aewkef;? rnDrnTwfeJY NydKuGJaewkef;/
'DawmY tD&efvdk edKifiHrsKd;uawmif usaemfwdkYedKifiHta&;udk tiftm;oHk; 0ifa&mufpGufzufzdkY avoHawG ypfvm&Jwm bmqef;ovJ/
wcsdefu NynfwGif;a&;udpördkY 0ifa&mufpGufzufvdkY r&ygbl;qdkwJY tmqD,HxJu tpövmrfbmom0if edKifiHawGu 0ifppfaq;r,fbmnm aNymvm&Jwm bmqef;ovJ/
vuf&SdtaNcaerSm usaemfwdkYta&;wBuD;vdktyfaewm edKifiHwumu aiGaBu;taxmufyHYr[kwfbl; enf;ynmtulnDr[kwfbl; edKifiHwumaxmufcHrSKr[kwfbl;? wu,fYudkvdktyfaewmu trsKd;om;nDnGwfa&;yJ/
nDnGwfa&;qdkwmeJY yxrqHk;nDnGwfzdkY vdktyfwmu edKifiHa&;orm;awGyJ/
edKifiHa&;orm;awG qdkwJYtxJurS edKifiH&JY uHBur®meJY tem*gwfudk wnfaqmufay;rJY qHk;Nzwfay;rJY vGwfawmfa&muf edKifiHa&;orm;awG nDnGwfzdkY tvGefta&;BuD;aeygw,f/ olwdkYnDnGwfrS wdkif;NynftwGufvdktyfaewJY Oya'awGudkNyK wdkif;Nynfudk tcuftcJNzpfapwJY acwfeJY ravQmfnDawmYwJY Oya'awGudk zsuf pwmawGvkyfedKifrSmyg/
a':atmifqef;pkBunf vTwfawmfxJa&mufoGm;w,f a&mufa&mufcsif;yJ vGwfawmfvmwm &efNzpfzdkYr[kwfbl; edKifiHYtusKd;twGuf twlwuG vufwGJtvkyfvkyfBur,fvdkY qdkvdkufawmY [m igwdkY arQmfvifYaeBuwJY nDnGwfa&;awmY &NyD[JYvdkY 0rf;omvdkYrSrqHk;cif tar&duef&JY wm;qD;ydwfqdkYxm;rSKudk y,fzsufa&;eJY 'Dvdky,fzsufatmif aNymedKifqdkedKifrJYolawGudk wm0efay;a&; qdkwmBuD; vTwfawmfxJrSm aqG;aEG;Buw,f qdkawmY 0rf;omcJY&orQ a&pHkarsmcJY&Nyefa&m/
tar&duefu olYedKifiHu pD;yGm;a&;orm;awGudk NrefrmNynfrSm &if;ESD;NrKwfESHcGifYNyKayrJY NrefrmYydkYukefudk olYedKifiHxJwifoGif;cGifYudkawmY qufydwfxm;owJY/ aNym&r,fqdk tawmfYudk vlyg;0wmyJ? tawmfYudkrw&m;wmyJ/ 'gayrJY olYedKifiHu Oya'NyKNyD; olYedKifiHom;awGudk rwifoGif;&bl;vdkY owfrSwfwmudk ab;vlu bmoGm;aNymvdkY&rvJ/ wu,fqdk rif;u igYukefawGrif;edKifiHxJ oGif;cGifYrNyK&if iguvnf; rif;edKifiHu ukefypönf;awG igYedKifiHxJ oGif;cGifYrNyKbl;uGmqdkNyD; oGm;wpfacsmif;csif;Oya'eJY wkefYNyef&rSm/
'gayrJY udk,fawGrSmu tJovdkwkefYNyefzdkYtiftm;r&Sd? olYypönf;awG olYenf;ynmawG vG,fvG,fuleJY udk,fxJroGif;rSmudkawmif aBumufvefYae&awmY *sif;pdrf;eJY rdwfov’if uZmwfudk ruedKifbl;av/
'geJYyJ a':pk qef&SifwHcgyGifYatmif cifAsm;wm0ef,lqdkwmrsKd; vkyfwmu oufoufrJY a':pkudk edKifiHa&;t& zdtm;ay;wmyJ qdkwmodomvGef;w,f? 'DvdkrsKd;eJY nDnGwfa&;udk b,fvdkwnfaqmufrvJ? 'DBum;xJ edKifiHudk OD;aqmifaewJY ygwDBuD;&JY xdyfwef;acgif;aqmifwpfa,mufu ay:wifBuD; NydKifbufygwDudk r&SKYpdwfwJY pdrfac:wJY pum;rsKd;awGaNymqdkwmvnf;awGY&w,f? olYpum;xJrSm vGwfawmfxJrSm olwdkYtrsm;pkqdkNyD; Oya'NyKtrwfawGBum;aoG;uGJpum;udk aNymwmrsKd;vnf;ygw,f? 'DvdkeJY nDnGwfNyD; NyJaeatmif tvkyfvkyfwJY vTwfawmfBuD; b,fvdkNzpfvmrvJ/ NyD;awmY NrefrmeJY Arm pum;vHkawGeJY tNiif;yGm;aewJY tcsdefuvnf;&Sdao;w,f/
tar&duefedKifu Nrefrmtay: qef&SifvkyfzdkYrvkyfzdkY qHk;Nzwfwm tar&duefyg? udk,fb,fvdkrS nTefBum;vdkYr&wJY olawG qef&SwfydwfwmzGifYwmudk rydwfzdkY zGifYzdkYtvkyf&SkyfaerJYtpm; udk,fvkyf&rJY tvkyfawGudkvkyf&if; udk,fYvrf;udk,favQmuf&r,fr[kwfvm;/
wu,fqdk vGwfawmfxJrSm ta&;wBuD;aqG;aEG;&rSmu NynfwGif;Nidrf;csrf;a&; b,fvdkwnfaqmufrvJ? trsKd;om;nDnGwfa&; b,fvdkvkyfrvJ 'gawGu t&rf;udkta&;BuD;aewm? Oyrm ucsifppfyGJ &yfatmifb,fvdkvkyf&rvJ? &cdkifaNrmufydkif;Nyóemudk b,fvdk&Sif;rvJ qdkwmrsKd;udk ta&;wBuD; aZmif;ay;NyD; aqG;aEG;&rSm/ r[kwfyJ edKifiHa&; usm;uGufa&GYaeawmY NyJatmifraNymeJY vkyfrJYtcsdefawmifr&Sdbl;/
wdkif;&if;om;tcsif;csif; emvnfoabmaygufrSKuvnf; trsKd;om;nDnGwfa&;rSm t"duusw,f/
wdkif;&if;om;tcsif;csif;wef;wlpdwf arG;zdkYu Arma&m usefwJY wdkif;&if;om;awGa&m tvGefudkvdktyfaew,f/ wef;wlxm;ygw,fb,favmufaNymaNym 'DbufacwfrSm Armr[kwfwJY wdkif;&if;om;awG ppfwyf&JY xdyfydkif;&mxl;rSm rawGY&wm wef;wlr[kwfbl;qdkwm xif&Sm;aewmyJ/
twlaevmcJYwmBumNyD; aexdkifrSKtpOftvmcsif; 'DavmufeD;pyfBuwJY wdkif;&ifom;awG rdrdwdkY&JYvdkvm;csufawG ay;qyfedKifrSKawG tNyeftvSefaNymqdkndSedSKif;Bu&if wdkif;&if;om;pnf;vHk;nDnGwfa&; qdkwm&udk&rSmyJ/ 1947 u usaemfwdkY wu,fnDnGwfcJYBuzl;wmyJ/ tJ'Dtcsdefudk NyefNyD; pdwful;,OfBunfYvdkuf&if ppf'PfaBumifY tkwfusKd;tkwfyJYawGeJY pkwfNywfaeayrJY wdkYtm;vHk;pnf;vHk;w,fqdkwJY BunfEl;p&mtodu acgif;aqmifawGtwGuf wdkif;Nynfudk topfwnfaqmufzdkYtwGuf tiftm;awG b,favmuf NynfY0aeapcJYrvJ/
'DvdkNzpfatmif acgif;aqmifawGutp usaemfwdkYtm;vHk; BudK;yrf;BuzdkYvdkaeNyD/
aemufwpfck usaemfwdkYtrsKd;om;pnf;vHk;a&;rSm r&SdrNzpfvdktyfwmu bmoma&;eJY edKifiHa&;udk aoaocsmcsmcGJxm;zdkYvnf; tvGefta&;BuD;ygw,f/
&mpk0ufavmuf ppfwyfu BuD;pdk;tkyfcsKyfcJYwJY usaemfwdkYedKifiHrSm wdkif;&if;om;tcsif;tcsif; aoG;pnf;nDnGwfrSK ysufpD;cJYovdk bmoma&;eJYt,l0g'eJY ywfowfNyD;awmYvnf; trsKd;om;aoG;pnf;nDnGwfrSKawG tBuD;tus,fysufpD;cJY&w,f/ txloNzifY bmomt,l0g'udktaBumif;NyKNyD; Ak'¨bmomr[kwfoludk edKifiH0efxrf;avmurSm tqifYNrif&mxl; ray;wmrsKd;awG[m trsKd;om;pnf;vHk;a&;udk tBuD;tus,fxdcdkufcJY&ovdk? t&nftcsif;&SdwJY bmomNcm;awGudk pD;yGm;a&;avmuxJudk wrifoufoufarmif;xnfYypfvdkufovdkvnf;Nzpfw,f/
aemufwpfcku olwdkYudk 'kwd,wef;pm;awGtNzpf tqifYcsxm;ovdkBuD;NzpfaeawmY edKifiHtay: wG,fwmpdwfuvnf; avQmYusapwmaygY/ 'gYtNyif bmoma&;toif;tyif;awGudk vSKdYvSKdY0Suf0Sufvdk vkyfvmBu&awmY Ak'¨bmom0ifawGeJYBum;rSm pdwf0rf;uGJrSKawG oHo,pdwfawGrsm;vmapw,f/
'gaBumifY edKifiHrSmpGJuyfaewJY bmoma&;eJY edKifiHa&; a&maxG;aerSKudk z,f&Sm;ypf&if; trsKd;om;nDnGwfa&; &apzdkY acgif;aqmifawG OD;aqmifBudK;yrf;&rSmNzpfw,f/
NrefrmNynfudk trJvnfvSD;ovdk vSD;zdkY rlqvifnDtudkrsm;qdkwJY tvHudkvTifYNyD; BudK;yrf;olawGu BudK;yrf;aeBuNyD usaemfwdkY nDnGwfrS 'D&efudkatmifNrifedKifrSmNzpfw,f/
wpfzufeJYwpfzuf edKifiHa&;usm;uGufa&GYwmaawG tmCmwawG cP&yfNyD; trsKd;om;nDnGwfa&;udk aZmif;ay;BuzdkYvdkaeNyD/
Admin3, akm, Andrei07, aprilboy, Ares, AungNN, badinf, barronbala, batoe, BH, bogyi79, Botazan, Ceiko, Chit.tat.lun.tu, chitpa, Clinton, Deadmanwalking, dec1820, Emerald Mya, Exoduz, exotic, explorer, fridayborn, gigabyte, GuruAM, hahahehe, happyvalley, hellocatcat, Hollinaz, honelay86, hsumyatmoe, Incubuz, Jim, Jin_kaleat, jokershan, julykoko2009, JustAsk, kapale, KM Wai, ko too, koshwemung, ktg, KyalEain, little caesar, mahawgani, mdychat, mgchaint, mgmgthan, Mod9, myananda, NEO, nnnaing, NyoMar, patriot, persie85, PiNyat, Ravan, robin76, Sailing, san19682000, Serious, silvia, sixlone, skyline2009, springnet1997, stroms, SuperPooh, swarlay, THIHA, thuthuaung, w4r10ck, weithet, Xeno, yankanar, yelynn80, yokesoe, ZAM, zelpha, zepeian, zero6, zzz
07-23-2012 03:19 PM #169
tck NzpfaewJh b*Fvm; udpö wck wnf; aMumifh xuf aemufxyf &ifqdkif&r,fh Nyoemaygif; aomif; aNcmuf axmif udk aNz&Sif;zkd ht"du vdktyfcsufu wrsdK;om;vHk;pnf;vHk;nDnGwfa&;yJ b*Fvm; Nyoem[m &cdkif vlrsdK;pk wckwnf;&Jh Nyoemr[kwfovdk &cdkifvlrsdK; wckwnf;eJ hvJ b,fvdk rS aNz&Sif;vdk h&r,fhNyoemr [kwfbl;/
'Dvdk NyoemawG NzpfaewJh tcsdefrSm pdwfysufp&m taumif;qHk; eJ ha'goNzpfp&m taumif;qHk; owif; awGu vuf&Sd NzpfaewJh NyoemawGudk toHk;csNyD; edkifiHa&; tNrwfxkyfrSLawG .. r&rSef; od&ufeJ hyk*d¾Kvfa&; wdkufcdkuf rSLawG .. b,fawmhrS rNyifqifedkifcJhwJh qifcsifwHkw&m;eJ hynmrJh atmufwef;pm; taNymtqdk awG .. tm;vHk; [m wdkif;Nynftem*gwftwGuf pdwfysuftm;avSsmhp&mawGcsnf;yJ../
wHcg;ydwfNyD; o&kyfNy trTef;wif vkyf&HkeJ htkyfcsKyf cJhwJh vufeuftm;udk; tmPmtm;udk; acwf udk rwwf omvdk h&yfwrf;u &yfNyD; taMumufw&m;eJ hNyKNyifaNymif;vJ a&; vkyfr,f qdkwJh pnf;urf; Nynf0wJh rD;p wzuf a&rSKwf wzuf 'Drdk ua&pD pHepfrSm rdrdwdk hrpGrf;wm awG b,favmufawmif &SdovJ? rdrdwdk hrodcJh wmawG em;rvnfcJhwm awG b,favmufawmif rS rsm;Nym;cJhovJ? rdrdwdk hvkyfcJhwJh vkyf&yfawG b,f avmufawmif rS rSm;,Gif;cJhovJ ..'gawGudk NyKNyifzdk haumif;atmifvkyfzdk hqdkwm rdrdwdk hb,fvdk rS rpGrf; rSef; odod csnf;eJ h .. odwJh taMumif;vJ tcgtm;avSsmfpGm 0efcHaevsufeJ h..pGrf;wJholawG wwfodem; vnfolawGudk ae&may;zdk ha&S hwef;wifzdk hwGef hqkwfaeqJ .. Niif;qef aeMuqJyJ ..b,favmufawmif pdwfysufzdk haumif;vdkufwJh vlawGvJ/ 'geJ hyJ wdkif;Nynfu wNcm;wdkif;NynfawGeJ hwef;wl&nfwl Nzpfzdk hb,f a&G hb,frSs qufavSsmuf&rvJ qdkwm rcef hrSef;bl; ../
tdrfwGif;ykef; tdrfus,f awG tNzpf arm[zHk;aewJhvlawGb0.. twÅawGeJ h ig rygvdk hrNzpfbl; qdkwmawGu ..tdrfeD;csif; telawm xJu vlacsmawG&Jh aNredrfh&m NzpfNrJ Nzpfvsuf eJ htNrJ vSHpdkuf cHae& w,f../ udk,fusdK;twGuf tNrwf &SdaeorSs rdrdtwGif;a&; 0ifrpGufzuf a&;qdkwJh ay:vpDu .. rdrdtusdK; wzufwvrf;u ,kwfr,fMuHawmh apmifhMunfhavhvma&; wdk hMum;0ifxdrf;odrf;a&;wdk hqkdwJh ay:ay: wif wif 0ifa&mufpGwfzufa&; qDudk wr[kwfNcif;aNymif;oGm;wm[m tifrwef cHNyif;zdk haumif;w,f .. tm; MuD;wJh oltedkifusifhwJh e,faNrydkifqdkifa&; udpö usawmh tedkifusifhrSef; odom xif&Sm;ygvsuf .. aqG; aEG; yGJav;awmif rvkyf&JwJh ... ol&JabmaMumifwJh .. awmaMumif MuGufolcdk; tzGJ h&Jh rl0g' awG udk t&Suf rJh atmufaMu;vdkufae&wJh AdkvfcsKyf a[mudef;xkyfcJhwJh zmo,f edkifiHb0a&muf&wm [m tifrwef cHNyif; emusnf;zdk haumif;w,f .../
rdrdtwGif;tcsif;csif;rSm rwlnDrSLawGaMumifh &ifcsif;uyfNyD; udkufcsifoavmufudkufMu zdk hb,favmufyJ tpG,f awGaoG;vdk hcsdK awG MuG edkifMuygap ... tNyifeJ hNzpfvmNyDqdk&ifawmh ausmcsif;uyfvdk hnDnGwf Mu zdk hta&;MuD;w,f ..'gudkrS &efol&Jh &efol[m rdwfaqG qkdNyD; olcdk;vuf"g;&dk;urf; wJh rsdK;rppf vkyf&yfeJ h.. tcuftcJ tMuyftwnf;xJu ae tNrwfxkyfcsifwJh atmufwef;pm; vkyf&yfawG udk &yfwrf; u r&yf ekdifbl; qdk&if rsufuef; rsdK;cspfawG rNrif&wJh twdyfb0u a&TxD; aqmif;cJh&wmawG udkrpifwGif;xJu ae aqG pOfrsdK;quf awmifhwae&if; eJ hrsdK;NyKwfMuayawmh ../
orw&Jh aMuNimcsuftay:rSm aMueyftm;&axmufcHaMumif; b,fvdkenf;eJ hyJ NyNy ... 'geJ hygwfouf vdk htwdkuftcHudk uef huGuf&SKef hcs wdkufcdkufzdk hvSKef haqmf Muw,fqdkwJh qifcsifwHkw&m;uif;rJh rSLeJ h nDnGwfa&; qdkwm b,f taygufurS a&mufvmedkifp&m r&Sdovdk .. vuf&SdNyoemudkvJ aNz&Sif;edkifp&m taMumif;r&Sdbl; .. vGefcJhwJh ESpfaygif; ESpf&m oHk;&mu udk,fhrif;udk,fcsif; qdkwJh a&T xD; aqmif;b0udk 'Dae h,lvdk h 'Duae hudk,fhwdkif;udk,fhNynfudk xlaxmif&if reufzef vlrsdK cH&r,fqkdwm avmuf qifcsif wHk w&m;av;eJ hrsufuef; rsdK;cspf pdwfav;udk enf;enf; avmufavSsmhNyD; nDnGwfa&; pum;aNymNyD; nDnD nGwf nGwf yl;aygif;Muoifhw,f../
udk,fhNynfwGif;u wdkif;&if;om;vlxkw&yfvHk;eJ h..tpdk;&vkyfwJh vlawGeJ hygwDawG tukefvHk; nDnDnGwf nGwfeJ hwa,mufeJ hwa,muf ae&mav;ay;vdk hwav;wpm;eJ hyl;aygif;aqmif&GufMur,f qdk&if b,f tiftm;MuD; NzpfNzpf tiftm;ao;NzpfNzpf ..acG;0Jpm;awGNzpfNzpf pdk;&drfaMumifhMu p&m wckrS r&Sdovdk b,f taumifydwfqdk h ydwfqdk h*&kpdkufp&m wuGufrS rvdk bl; ... yxr urÇmppf&SKH; wJh *sm rPDvdk pdwfrsdK; arG; edkifMuzdk hvdkw,f ../
azhpfbGwf xJu awG hvdk h&S,fvdkufw,f .. tckvdk tcsdefrSm 'Dvdk NywfNywfom;om;eJ hrmrmausmausm aNym&JwJh tpdk;&w&yf vdkovdk &mESKef;Nynfha xmufcHr,fh vlxkvJ &Sdzdk hvdkw,f../
အခြားသော လွတ်လပ်ခွင့်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ " ထွက်ခွါသွားနိုင်ခွင့် ''
၀န်ကြီးချုပ်ဂျုလီယာဂျစ်လတ်ကအစ္စလမ်ရှာရိယဥပဒေနဲ့ အညီ နေထိုင်
လိုတယ်ဆိုတဲ့ သြစတြေးလျ မွတ်ဆလင်တွေကို ဒီက ထွက်သွားကြဖို့
ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီးတွေကို တာဆီးနိုင်
ဖို့ရာ အစိုးရက အစွန်းရောက်သမားတွေအပေါ်ဦးတည်အာရုံစိုက်နေချိန် မှာ
ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါ ။သီးခြားအနေနဲ့ ဂျစ်လတ်က သူမဟာ နိုင်ငံက
မွတ်ဆလင်ဗလီတွေကို သူလျှိုအဖွဲအစည်းတွေကနေ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု
နေတာကို ထောက်ခံအားပေးကြောင်း ပြောကြားလိုက်လို့ သြစတြေးလျှမွတ်ဆလင်များကိုဒေါက ထွက်စေခဲ့တာပါ။
" ပြည်ပကလာရောက်နေထိုင်သူတွေကသာ အသားကျအောင်လုပ်ရ
မှာလေ၊ သြစတြေးလျသားတွေက လုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ နေချင်နေ မနေချင်ရင် ထွက်သား''
" တို့ဟာ တချိုိ့ပုဂ္ဂလိကတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကို စော်ကားမိသလား
ဆိုတာကို တွေးတွေးပူနေရတဲ့ ဒီနိုင်ငံအတွက် ကျွန်မ ညည်းငွေ့လာရပါပြီး၊ ဘာလီကျွန်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးကတည်းက ကျွန်မတို့သြစတြေးလျှသား အများစုမှာ မျိုးချက်စိတ်ဓာတ်တွေ တချိန်ထိုး တိုးမြင့်လာတာတွေသိခဲ့
" ကျွန်မတို့ ယဉ်ကျေးမှုဟာ အနှစ် ၂၀၀ မျှမက အမျိုးသား/သမီး သန်းပေါင်းများစွာက ရုန်းကန်ကြိုးစား တိုက်ပွဲဝင် အောင်ပွဲဆင်ပြီးမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါ''
"ကျွန်မတုိ့ အင်္ဂလိမ်စကားကိုပဲ အဓိကပြောပါတယ်။ စပိန်၊ လက်ဘနွန်၊ အာရပ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ရုရှားနဲ့ အခြားဘာသာစကားတွေ မပြောပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရှင်တို့ ကျွန်မတို့လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အပါးအ၀င်ဖြစ်ချင်တယ်
ဆိုရင် ဒီဘာသာစကားကို သင်ကြားပါ''
"သြစတြေးလျလူမျိုးအားလုံးဟာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြပါတယ် ခရစ်ယန်တချို့တလေကြောင့် လင်္ကျာဝါဒီကြောင့်၊ နိုင်ငံရေးနှီုးဆော်ချက် စတာတွေကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး၊ ခရစ်ယန်အမျိုးသား အမျိုးသမီး အများက ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကို ခရစ်ယန်အယူဝါဒအပေါ်အခြေပြုကာ ထူထောင်ခဲ့ကြ
ကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာကဗ္မည်းအက္ခရာ တင်ခဲ့ကြတာပါ။''
"ဒီအကြောင်းကို ကျွန်မတို့ရဲ့စာသင်ခန်းနံရံတွေမှာ ဖေါ်ပြထားနိုင်မယ်
ဆိုရင် သင့်လျော်မှာပါ ဘုရားသခင်နဲ့သင် အဆင်ပြေဖို့မရှိဘူးဆိုရင် သင်ရဲ့အိမ်ရာသစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အခြား တစ်နေရာမှာသာ စဉ်းစားပါတော့
လို့ ကျွန်မ အကြံပေးပါရစေ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်မတို့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမို့လို့ပါဘဲ''
"ကျွန်မတို့ဟာ သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုလက်ခံပါတယ် ဘာ ညာ မေးခွန်း
ထုတ်နေမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူုး ကျွန်မတို့တောင်းဆိုနေတာတစ်ခုလုံးက
သင်လည်း ကျွန်မတို့ယုံကြည်ချက်တွေကို လက်ခံဖို့ ကျွန်မတို့နဲ့
အတူတကွ အေးအေးချမ်းချမ်း အဆင်ပြေပြေနေထိုင်သွားကြဖို့ပါဘဲ''
" 'ဒါဟာ ကျွန်မတုိ့ရဲ့တိုင်ပြည်၊ နယ်မြေ၊ နေထိုင်မှုပုံစံပါ။ အဲဒီ ခံစား
စံစားခွင့်အားလုံးကို သင်တို့ကို ကျွန်မတို့က ပေးအပ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့်
သင်က ကျွန်မတို့ရဲ့အလံ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့အဓိဋ္ဌာန်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ ခရစ်ယန်အယူ သို့မဟုတ် ကျွန်မတို့ရဲ့လူနေမှုဘ၀ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ငြင်ခုံလာမယ်
ဆိုရင်တော့ ကျွန်မအလေးအနက် အားပေးချင်တာက သြစတေးလျ သားတို့ရဲ့ အခြားသော လွတ်လပ်ခွင့်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ "ထွက်ခွါသွားနိုင်ခွင့်'' ကို ရယူလိုက်ကြဖို့ပါပဲ။
"သင် ဒီမှာမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင် ပြန်သွားပါ။ ကွန်မတို့ သင့်ကို အတင်း
လာခိုင်းခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူုး၊ သင်ကသာ လာနေပါရစေလို့
တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံကို သင်ကလည်း လက်ခံပေးပါ''
ဒီစာကို အင်္ဂလန်၊ ကနေဒါနဲ့ အမေရိကန်တို့မှာလဲ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အလာတူး အမှန်တရားတွေကို ပြောရဲတဲ့သတ္တိတွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိလာမှာပါ...
*ရခိုင်ဒေသအတွင်းသို့ မွတ်ဆလင်များ ၀င်ရောက်လာခြင်း နှင့် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုအဆင့်အဆင့်စာအုပ်မှ ကူးယူတင်ပြပါသည် ။
akm, Andrei07, apphyo, aprilboy, AungNN, aungzaya, barronbala, batoe, Botazan, Ceiko, certainboy, Chit.tat.lun.tu, Clinton, Exoduz, fieldmarshal, fridayborn, happyvalley, HlaingKaLayThin, Hollinaz, honelay86, hsumyatmoe, Incubuz, Jim, Jin_kaleat, julykoko2009, JustAsk, k-pooh, khit, ko too, kokothaw, koshwemung, ktg, little caesar, mahawgani, Mahuya, mgmgthan, mokenlay, nail, PiNyat, Ravan, robin76, san19682000, Serious, springnet1997, THIHA, weithet, yankanar, yelynn80, yokesoe, zelpha, zepeian, zero6, zhtet123, zzz
07-23-2012 05:38 PM #170
Junior Cupid is in the middle east
Thanked 3,458 Times in 139 Posts
Hi Ko Mokenlay,
I really like and appreciate your post. But I'd like to correct the fact that there were no Brigadier Generals from ethnic minorities apart from Major General Tin Oo and Maj.General Myint Swe.
The following are other Bogyokes from ethnic groups:
Maj. Gen. Ba Thaw ( Shan)
Maj. Gen. Saw Pru (Rakhine)
Brig. Gen. L. Khun Phan (Kachin)
Brig. Gen. Htaung Zar Khaing ( Chin)
All of them are from the Socialist Era.
I ' m sure there were other Kayin Bogyokes but I can't recall their names. Perhaps, Sayar koluchaw knows. Looking forward to read more from you!
akm, AungNN, batoe, BH, brokenworld, happyvalley, honelay86, hsumyatmoe, Jim, Jin_kaleat, julykoko2009, k-pooh, khit, ko too, koluchaw, little caesar, mahawgani, mgmgthan, mokenlay, patriot, tharlainmar, THIHA, tiptop, yankanar, yokesoe, zepeian, zzz